I-LG G8X ThinQ: Isiphelo esitsha sophawu lwentengiso esiboniswe kwi-IFA 2019 | Iindaba zeGajethi
I-LG isishiyile ngeefowuni zayo eziphakathi eziphakathi ku-IFA 2019, sithethe ngayo. Nangona ayisiyiyo kuphela inoveli esiveliswa yinkampani. Kwaye kwakhona bazise ifowuni yabo entsha ephezulu ye-LG G8X ThinQ. Le modeli iphantse yavuza iiveki ezimbalwa ezidlulileyo kwaye isemthethweni kulo msitho eBerlin.
I-LG G8X ThinQ ithatha indawo kwi-G8 thaca ngoFebruwari walo nyaka. Igcina izinto ezithile ezifanayo kunye nemodeli echaziweyo, nangona kwangaxeshanye ibandakanya izinto ezithile ezintsha. Ukongeza, iza nezixhobo ezimbini zeScreen, ekuvumela ukuba ube nescreen esikabini kwifowuni.
Uyilo luhlala ngaphandle kotshintsho oluninzi, nenotshi ekubunjweni kwethontsi lamanzi Kwiskrini sakho. Inzwa yeminwe ibekwe phantsi kwesikrini sesixhobo. Ikhamera ephindwe kabini isilindile ngasemva, nto leyo iyamangalisa, emva kokuba nekhamera kathathu kwi-G8 ngoFebruwari kulo nyaka.
1 Ukucaciswa kwe-LG G8X ThinQ
Ukucaciswa kwe-LG G8X ThinQ
I-LG G8X ThinQ yimodeli elungileyo ngaphakathi kuluhlu oluphezulu uphawu Korean. Inamandla, iprosesa elungileyo, inoyilo lwangoku, kwaye iyimodeli elungeleleneyo ngokweenkcukacha. Ukongeza, ubukho besixhobo esikwisikrini esiziBini ngokucacileyo sonyusa amathuba okusetyenziswa, siyenza imodeli efanelekileyo xa udlala imidlalo, umzekelo. Oku kukucaciswa okupheleleyo kwesi siphelo siphezulu:
Ukucaciswa kobuchwephesha kwi-LG G8X ThinQ
Umzekelo I-G8X ThinQ
Isikrini I-6.4 intshi OLED ene-HD epheleleyo + isisombululo se-2340 x 1080 pixels kunye ne-HDR10
Ukugcinwa kwangaphakathi I-128GB (iyandiswa ukuya kuthi ga kwi-128GB ngekhadi le-MicroSD)
Ikhamera esemva 12 + 13 MP
Conectividad I-Wi-Fi 802.11 b / g / n -I-Bluetooth 5.0-GPS / i-AGPS / i-GLONASS-I-SIM ezimbini-i-USB C 3.1 - irediyo ye-FM
Ezinye izinto Inzwa yeminwe ephantsi kwescreen-NFC-IP68 certification-MIL-STD 810G military resistance
Ibhetri I-4.000 mAh eneNtlawulo ekhawulezileyo ye-3.0
Ubukhulu Ubukhulu: 159.3 x 75.8 x 8.4 mm
Enye yezinto ezimangalisayo kukusetyenziswa kwekhamera ephindwe kabini kule meko. I-LG G8 eboniswe ngoFebruwari isebenzise ikhamera kathathu, kodwa kulo mntu ungene ezihlangwini zakhe inkampani ibuyela kwi-sensor ezimbini, i-12 + 13 MP kule meko. Inikwe amandla yisoftware yenkampani, enemisebenzi efana ne-AI Cam phakathi kwabanye, ukongeza ekubeni neGoogle Lens nayo. Ukusebenza kakuhle kulindeleke kule khamera yefowuni.
Isixhobo esikwisikrini esiziBini senza ukubonakala kwi-LG G8X ThinQ, ekubeni siyibonile kwi-LG V50 ngoFebruwari walo nyaka. Sisincedisi esongeza iscreen sesibini kwifowuni, semilinganiselo efanayo kunye nenotshi efanayo neyasekuqaleni. Nangona le nto ifumanekayo ihlaziyiwe ngokuthelekisa naleyo basishiye ngayo ngoFebruwari. Njengoko iscreen sesibini songezwa ngaphandle kuyo, 2.1 intshi ngobukhulu. Ngale ndlela, xa ifowuni ivaliwe, singayisebenzisa njengesikrini sezaziso okanye sibone ixesha.
Inkampani ayikhange ithethe nto malunga nokuqaliswa kwale LG G8X ThinQ, ngaphandle kwalonto izakwaziswa kwikota yesine yalo nyaka. Ke kufuneka silinde ubuncinci inyanga de esi siphelo sitsha siveliswe ngokusemthethweni ezivenkileni. Ngokuqinisekileyo kwiiveki ezimbalwa kuyakubakho idatha ethe kratya xa ungayithenga le fowuni intsha. Isixhobo esineScreen se-Screen kuya kufuneka sithengwe sodwa kuyo nayiphi na imeko.
Akukho datha kwixabiso lefowuni elinikiweyo nokuba. Ke kufuneka silinde iiveki ezimbalwa ukuba i-LG G8X ThinQ ibhengezwe ngokusemthethweni eYurophu. Iya kuba yifowuni enomdla kakhulu, nangona sisoyika ukuba iya kuba nexabiso eliphezulu kakhulu, njengoko kuhlala kunjalo kwiifowuni zebhanti, eziya kuthi zinciphise amathuba okuphumelela kwintengiso.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Iindaba zeGajethi » Umnxeba » I-LG G8X ThinQ: Isiphelo esitsha sophawu
Amawele yenye yeefresh'n Rebel AirPods